DRC: Falanqaynta saxaafadda ee Isniintaan
ACCUEIL » DIB U EEGID AFRICAN PRESS DRC: Dib-u-eegista saxaafadda ee Isniinta 26 Agoosto 2019 - Afrika
- Warka waxaa xukuma baahinta dowladda Sylvestre Ilunga Ilunkamba ee dadka reer Kongo ay filayaan tan iyo markii la aasaasay Felix Tshisekedi xafiiska ugu sareeya.
"Tshisekedi: Xukuumadiisii ​​ugu horreysay ee la daabacay", wuxuu ku dhawaaqayaa AFRICANEWS. Muddo dheer la sugayay, kooxdii ugu horreysay ee dowladdii Fatshi ayaa ugu dambeyntii ka tagtay hooyanimada horaantii aroornimadii, wax yar ka hor duullimaadkii Madaxweynaha Jamhuuriyadda oo ku duuley Japan. Isku soo wada duuboo, xubnaha 66, ragga 55 iyo dumarka 17, kuwaas oo, oo hogaaminaya PM Sylvestre Ilunga, ay si dhakhso leh u shaqeyn doonaan.
AFRICANEWS ayaa xustay in gobolada oo dhan si sax ah ayaa loo matalaa. Haweenku maahan kuwa kale, oo ay ku jiraan dadka naafada ah.
Daabacaadan kadib, kooxda Raiisul Wasaaraha Ilunga Ilunkamba waxaa loo bandhigi doonaa Golaha Qaranka. Halkaas, wakiilo qaran ayaa maqli doona barnaamijka dowladda oo dood kadib, haddii barnaamijkan la aqbalo dowladda ayaa la maalgashan doonaa.
PROSPERITY waxay daabacdaa a milicsiga Jean-Pierre Kambila Kankwende, oo qayb ka ah isbahaysiga FCC-CACH. Tan dambe waxay xustay in dadka reer Kongo ee ka baqaya culayska maaliyadeed ee dowladda Ilunkamba ay tahay inay ka fekeraan waxa nagu kacaya hal ama in ka badan oo dagaal oo horseedi kara kuwa jecel inay qaataan maahmaahda ah in la iloobo. Raadinta wada-noolaanshaha iyo nabadda DRC waxay u qalmaan dhowr boqol milyan oo faran.
Dhanka Kambila, xaaladda DRC maanta, su'aasha ugu habboon ee la xiriirta waa inay ahaato waxqabadka dowladda. Koox ka mid ah dadka 65 ma noqon karaan kuwo wax ku ool ah? Jawaabtu waa haa, hadaan u adeegsano qaabab wanaagsan labadaba xulashada ilaha aadanaha, maareynta, kormeerka shaqada iyo xakamaynta. Sidaa darteed waa muhiim in la casuumo iyo, oo dhan, in lagu dhiirrigeliyo Ra'iisul Wasaaraha in la helo habab maareyn oo hufan oo suuragal ah inuu siiyo waxtarka ugu wanaagsan ee dowladdiisa.
MUUQAALKA ayaa soo tabinaya, sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha. hal abuurnimada ugu weyn ayaa la xiriirta tirooyinka cusub dad aan weligood wasiir noqonin noloshooda. Waxay matalaan 76,9% dhanka 23%. Intaa waxaa u dheer, waxaa jira Wasaarad loo wakiishay dadka naafada ah (PWH) iyo dadka kale ee nugul. "Tani waa waayo-aragnimo wada-noolaansho oo ah tii ugu horreysay ee DRC waxayna qaadatay waqti udhaxeeya dhammaan baraha internetka si loo caddeeyo waxa kadhigi doona wada-noolaansho, maxaa yeelay halkan waxaan leenahay dowlad xaqiijin doonta himilada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda, is bedelka hadda imminka bilaabmaya, ayuu yidhi Ra'iisul Wasaaraha, oo ballanqaaday inuu ka shaqeyn doono hagaajinta xaaladaha nololeed ee muwaadiniinta reer Kongo, sababtoo ah yoolkaas waa ujeedka dowlad.
CONGO NEW waxay xustay in si loo gaaro barnaamijkeeda “laga iibiyo” cod-bixiyeyaasha inta lagu jiro ololaha doorashada, Félix-Antoine Tshisekedi ayaa raba inay hogaamiso koox dawladeed oo ka kooban "quduusiin", wasiirro aan socodsiinin dheryo iyo bayaano gadaashooda ah, dad aan ka qayb qaadan boobkii ilaha DRC ama aan gacmahooda ku gelin khasnadaha dawladda, ama aan haysan ma jirin gacmo dhiig ku daadanaya.